Tag: tatitra momba ny varotra | Martech Zone
Tag: tatitra momba ny varotra
Ambition: Gamification hitantanana, hanentanana ary hampitombo ny fahombiazan'ny ekipa mpivarotra anao
Alarobia, Martsa 17, 2021 Alarobia, Martsa 17, 2021 Brian Trautschold
Ilaina amin'ny fampiroboroboana ny varotra. Miaraka amin'ny ekipa mpivarotra mirotsaka an-tsehatra dia mahatsapa ho mavitrika kokoa izy ireo ary mifandray amin'ny tanjon'ny fikambanana sy ny tanjony. Ny voka-dratsy ateraky ny mpiasa misintaka amin'ny fikambanana dia mety ho lehibe - toy ny famokarana tsy misy fetra, ary ny talenta sy ny loharanon-karena very maina. Raha ny momba ny ekipa fivarotana manokana, ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra dia mety handany vola amin'ny fidiram-bolan'ny orinasa. Ny orinasa dia tsy maintsy mitady fomba hampandraisana anjara mavitrika ny ekipa mpivarotra, na ahiana hitranga
Tsy misy olona hiady hevitra fa ny LinkedIn no sehatra tambajotra sosialy mifototra amin'ny asa eto an-tany. Raha ny marina dia mbola tsy nijery resume natambatra ho an'ny mpifaninana aho ary tsy nanavao ny tohiko manokana tao anatin'ny folo taona taorian'ny nampiasako ny LinkedIn. Ny LinkedIn dia tsy mamela ahy hahita izay rehetra ataon'ny resa fotsiny, fa afaka mikaroka ihany koa ny tamba-jotra ny kandidà ary mahita hoe iza no niarahan'izy ireo niasa sy avy - avy eo hifandraisa amin'ireo olona ireo hahalala
Freshsales: mitarika, misambotra, manakaiky, ary mitaiza ho an'ny orinasanao amin'ny sehatra fivarotana iray
Alakamisy Oktobra Oktobra 8, 2020 Alakamisy Oktobra Oktobra 8, 2020 Douglas Karr
Ny ankamaroan'ny CRM sy ny sehatra fampidirana varotra ao amin'ny indostria dia mitaky fampidirana, fampitambarana ary fitantanana. Misy taham-pahombiazana avo lenta amin'ny fananganana ireo fitaovana ireo satria manelingelina ny fikambanananao izany, mitaky ny mpanolo-tsaina sy ny mpamorona miasa matetika. Tsy lazaina intsony ny fotoana fanampiny takiana amin'ny fidirana angon-drakitra ary avy eo kely na tsy misy faharanitan-tsaina na fahitana momba ny dian'ny prospecta sy ny mpanjifanao. Freshsales dia
Maninona ny HubSpot's CRM maimaim-poana dia Skyrocketing
Alatsinainy, May 13, 2019 Alatsinainy, May 13, 2019 Douglas Karr
Amin'ny andro voalohan'ny orinasa dia tsy sarotra ny mitantana vaovao momba ny mpifandray sy ny mpanjifanao. Na izany aza, rehefa mihalehibe ny orinasanao ary rehefa mahazo mpanjifa bebe kokoa ianao ary manakarama mpiasa marobe, ny vaovao momba ny fifandraisana dia miparitaka manerana ny takelaka, ny takelaka, ny taratasy miraikitra, ary ireo fahatsiarovana manjavozavo. Mahagaga ny fitomboan'ny orinasa ary miaraka aminy ny filana mandamina ny mombamomba anao. Eto no miditra ny HubSpot CRM. HubSpot CRM dia natsangana hatramin'ny tany mba ho vonona amin'ny maoderina
Alarobia 19, 2015 Alarobia, Oktobra 28, 2020 Douglas Karr
RelateIQ dia CRM tsotra kokoa izay mifangaro amin'ny boaty mailakao handevonana sy handamina data avy hatrany avy amin'ny loharanom-baovao tsirairay. Ny RelateIQ dia manaparitaka ho azy ny angona avy amin'ny mailaka miditra sy ivelany, kalandrie ary antso an-tariby (na dia ny fampiharana finday aza) mba hanafoanana ny fidiran'ny angon-drakitra ao amin'ny CRM. Tena mandroso tokoa izany ka raha misy mandefa mailaka aminao ary tsy mamaly ianao dia hamorona fampahatsiahivana ho azy ho anao izy ireo. RelateIQ dia manafoana ny fidiran'ny data amin'ny alàlan'ny fisamborana azy ho azy